Ungayenza kanjani into yokwenziwa ngemodeli - Inqubo yokwakha isipanji - elula futhi ephumelelayo! • Ukulingisa World
———- AMAKHASI ———-
———– I-BLOG ———–
Indawo yokusebenzela: ngemodeli kusuka ku-A kuye ku-Z
Igalari yemisebenzi eqediwe
I-DIY: Ukwenza i-DIY Model
---- ISITOLO ----
Ama-oda wesitolo esidayisa yonke impahla
Ungayenza kanjani into yokwenziwa ngemodeli - Inqubo yokwakha isipanji - elula futhi ephumelelayo!
Imodeli yomhlaba Imihlahlandlela yokumodela Izinhlobo zezulu 2018-04-04 | 0
Ukuklwebheka ngopende kumodeli kubukeka kusebenza kahle, kuvame ukwenziwa ezimotweni zamasosha nasezindiza, kubanikeze uzipho nokusikwa okungokoqobo. Noma iyiphi imishini esebenza ezimweni ezinzima, ikakhulukazi ezempi, ikhombisa izimpawu zokuguga nezinyembezi, futhi iqoqa imidanso, imihuzuko kanye nokuklwebheka cishe kuzo zonke izinyathelo. Kuyafaneleka ukucabanga ngalokhu kumodeli. Kulo mbhalo, ngethula indlela yokwenza upholstery kwimodeli ngisebenzisa isiponji esikhundleni sebhulashi, okuyindlela ethandwa kakhulu futhi elula ngokumangalisayo yesimo sezulu.
Indlela yokuklwebha nokunwaya nayo ibuye ibizwa nge- "chipping"
Yenziwe ngebhulashi, isb.imane nje ipendiwe, kunzima ukuyilawula, into yokwakhiwa ayiyona encane futhi engahleliwe njengokusetshenziswa kwesiponji. Ngakho-ke, sigxila kukho. Esikudingayo ukutholakala yonke indawo - Ngisithanda kakhulu isiponji sokwenza izinto zokuhlobisa, ebesiyiphakethe eligcwalisiwe eline- "alledrogo". Ungasebenzisa futhi isiponji ukugeza izitsha noma ukugeza, kepha khomba ezithambile neziminyene, hhayi ezimahhadla ezine "mehlo" emikhulu. Ucezu lwesiponji enginalo luzohlala iminyaka.
Ngaphezu kwesiponji, sidinga umbala ofanele wepende wokupholisa izinto zethu. Kumele kukhunjulwe ukuthi insimbi izokonakala ngokushesha ngaphansi kwethonya lezimo zezulu, ngakho-ke qaphela imibala ecwebezelayo - umbala omnyama onsundu ubukeka umuhle lapha. Kunemibala ekhethekile yokupenda okugoqekayo okuthengiswayo ngomthunzi ophelele. Ngangivame ukusebenzisa umbala we-mahagona ovela kuMnu. Ukuzilibazisa. Kodwa-ke, uma ufuna ukwenza "okusha" okokugqoka, khumbula ukuthi insimbi esetshenziselwe izikhali ayikhanyi njengezinsimbi ezipholishiwe, ngakho-ke khetha umbala omnyama, ongcolile wensimbi. Kukhona nodaba lwezindiza, izikhumba zazo ezenziwe nge-aluminium - lapha ukukhetha kusobala - i-aluminium ayigqwali noma ingcolisi.
Kimi, umbala wokuzikhethela upende we-acrylic "chipping" kusuka ku-Ammo of Mig. Uma ungenayo, futhi unama-matte browns alula, ungawaxubanisa namnyama, futhi kufanele i-matte:
Uyenza kanjani into yokuhlobisa ngesipanji
Dabula ucezu lwesipanji ukuze lubanjwe kalula ngeminwe emibili,
Lungisa ithonsi likapende,
Cindezela isipanji bese usifaka ngopende,
Khama ithawula elihlanzekile noma lephepha kuze kube liqala ukushiya imikhondo ehlakazeke kakhulu, ngaphandle kokuchitha upende. Isipanji kufanele somile. Lapho ikhula kakhulu, kulapho intekenteke ibe lula,
Ngamachashazi amnene, gcizelela ukuthungwa kwesipanji ezindaweni ezikhethiwe. Ungayigcobisi, ungayicindezeli - kumane nje kuyibhulashi:
Ukwenza nini futhi nini
Ukuzivocavoca nini umbuzo wokuthanda. Kimi, i-oda libukeka kanjena: ukudweba - iphepha lokulandela umkhondo - wash - ukugoqa. Abanye basebenzisa i-padding ngaphambili washem. Kunengqondo uma sifuna ukwenza okujwayelekile wash, imodeli engcolile. Kodwa-ke, okokufaka kufanele futhi kuvikelwe nge-matt varnish, ngaphandle kwalokho ama-solvents asetshenziselwa wash'futhi bangageza izinto zethu zokuhlobisa.
Kuphi? Vele, okuningi kuncike ekutheni sifuna ukuyethula kanjani imodeli - kancane noma igugile kakhulu. Okokuqala, lokhu kuzoba wonke amanxeba nezindawo ezichayeke ekulimaleni. Futhi, lapho iqembu lihamba khona, kuzovela imihuzuko. Kubalulekile ukuthi ungasebenzisi isiponji ngokuqonde. Zama ukwenza izingcezu zemodeli ezinde, ezinde kunamakhekhe awodwa.
Ungayenza kanjani into yokuhlobisa ngemodeli ngesiponji, futhi
Into ebaluleke kakhulu ukuzwa isiponji.
Okokuqala, zijwayeze kokunye, njengesivalo sesembozo semargarini. Bona ukuthi ungayisebenzisa kanjani ingcindezi emarimu ukuze ungenzi ibala, kepha fafaza.
Faka isiponji ngobumnene, ungasibambi, ungasigcobi, ungasithambisi. Ukuhamba okusheshayo kuzosebenza kahle kakhulu.
Zama ukugwema amaqoqo we-upholstery yamabala, yenza izinto zokuhlobisa kumodeli kakhulu ngamaphaneli, emaphethelweni, nxazonke zemigodi.
Jabulela umphumela omuhle!
Uyini umphumela wamachipisi opende kumodeli lapho usebenzisa isiponji?
model ngaphambi kokusebenzisa inqubo:
ngemuva kokusebenzisa inqubo yokuphotha:
for Wabasaqalayo Amasu wokumodela isimo sezulu
Langaphambilini Okuthunyelwe kwangaphambilini: IMiniArt BANTAM 40 BRC enabasebenzi, 1/35 - igalari nokuvela kokwakhiwa
Olandelayo: Iposi elilandelayo: "Iphalethi emanzi" - usizo ngokudweba ngama-acrylics
Engeza amazwana Khansela impendulo
Isayithi lisebenzisa i-Akismet ukunciphisa ugaxekile. Thola okuningi mayelana nokuthi idatha yamazwana icutshungulwa kanjani.
Isitolo sethu ku-Allegro SMART!
Imali	 EUR	GBP	USD	PLN
Sisebenza ngo-09-17 ku-UTC + 01: 00 / UTC +02: 00 zone zone time
Ukuxhumana kwamazwe omhlaba
Thumela i-imeyili kuleli kheli elilandelayo:
I-Fanpage Fb yethu
© 2021 Imodeli Yomhlaba. Yakhelwe ngokusebenzisa i-WordPress ne Itimu ye-Mesmerize